Kubonakala ngathi imfuno yee-AirPods iyawa kwaye iApple ihambisa ithebhu | Ndisuka mac
Sibe namahemuhemu ixesha elide malunga nokufika okunokwenzeka kwe ezinye ii-AirPod zesizukulwana sesithathu kwaye oku kunokwenzeka ukuba abasebenzisi balinde inkcazo-ntetho yabo uninzi lwabo lulibazisa ukuthengwa namhlanje.
NgokukaNikkei, inkampani yaseCupertino iyalela abathengisi ukunciphisa imveliso yee-AirPod phakathi kwe-25 kunye ne-30%. Isizathu kukuba ikakhulu banesitokhwe esaneleyo sokubonelela ngemfuno yangoku ngaphandle kwesidingo sokwenza ngaphezulu.
Imithombo esondeleyo kwezi ndaba zokuncitshiswa kwemveliso yalumkisa uNikkei ukuba uApple utshintshe uqikelelo lwentengiso kunye Okwangoku iceba ukuvelisa iiyunithi ezingama-75 ukuya kuma-85 ezigidi yee-headphone ezingenazingcingo ngo-2021. Inani elibonelelweyo liwela kufutshane noqikelelo lwemveliso lwangaphambili lweeyunithi ezili-110 lezigidi.
Ukufika kwe-AirPods Pro kunye nokuphuculwa kwezixhobo zolu khuphiswano Banokuba banento yokwenza nokuhla kweentengiso, okunempembelelo ngqo kwimveliso yee-headphone ze-Apple. Kwakhona, njengoko besilumkisile ekuqaleni, inani lamahemuhemu esiwabonayo malunga nokufika kwesizukulwana sesithathu se-AirPods senza ukuba abasebenzisi abaninzi balinde ukutshintsha ii-headphone zabo.
Olunye uphononongo lweemarike njengolo lwenziwe ngexesha NgoJanuwari yiConterpoint, kwaqikelelwa ukuba iApple yehla ukusuka kwiipesenti ezingama-41 ukuya kuma-29% kwintengiso yentloko ngezizathu ezahlukeneyo kwisithuba esingaphantsi kweenyanga ezilithoba. Njengokuba abo bakhuphisana nabo besitsho, amarhe kunye nabanye, benza ukuthengisa kunciphe kwaye ke isitokhwe kwizitora siphezulu
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Amahemuhemu » Kubonakala ngathi ibango le-AirPods liyawa kwaye iApple ihambisa ithebhu